Zviwanikwa uye Zvishandiso - NewGenApps - DeepTech, FinTech, Blockchain, Cloud, Nhare, Ongororo
Sezvo maindasitiri mazhinji ari kuratidza kuda kuvapo pamhepo, zviwanikwa uye indasitiri yezvishandiso haisi kure kumashure. Utility masangano akawana webhu sesarudzo yavo yekupedzisira kugadzira bhizinesi rakawanda. Indaneti inovhura hub ye kutaurirana migero yavo.
Sezvo maindasitiri mazhinji uye akawanda ari kuratidza kuda kuita kuvepo pamhepo, zviwanikwa uye indasitiri yekushandisa haisi kumashure kumashure. Zvinhu zvekushandisa zvakawana webhu sesarudzo yavo yekupedzisira kuburitsa bhizinesi rakawanda. Indaneti inovavhurira nzvimbo yekutaurirana kwavari.
1. Chengetedza yakavhurika yekutaurirana chiteshi pakati pekupedzisira vashandisi uye zvekushandisa indasitiri
2. Zivisa mutengi nezvemazuva akakosha / zviziviso pane zvakakosha
3. Utility software uye maapplication pane akasiyana smartphone mapuratifomu uye mabhurawuza ewebhu kuti akwane zvaunoda chaizvo.
4. Dhawunirodha uye tumira mafomu
5. Nyorera basa
6. Bvumira vatengi kuwana mirau yakakosha